Ciidamada Ammaanka oo xiray xaruntii shirkadda AMAL Garowe. – Radio Daljir
Ciidamada Ammaanka oo xiray xaruntii shirkadda AMAL Garowe.
Agoosto 14, 2016 11:48 g 0
Garoowe, Aug 15 2016–Ciidamada dowladda Puntland ay saaka xiray Xarunta Shirkadda Xawilaada Amal ee Magaalada Garowe, iyagoona xilli hore saaka shaqaalaha xarumaah AMAL Garoowe ku wargeliyey in shirkadu xirantahay.
Ciidanka saaka aroortii xiray xarunta shirkadda ayaa waxaa lasheegay inay yihiin kuwa ka amar qaata madaxweyne ku-xigeeenka dowladda Puntland Eng Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey oo amarkaasi bixiyey.
Ilaa hadda ma cadda sababta ka dambaysa xariga xawaaladdaasi, waxaase shaqaalaha xarunta qaarkood ay warbaahinta u xaqiijiyeen in madaxda shirkaddu ay diideen inay bixiyaan lacag dhan 60, 000 oo dollar oo ammaanka looga qaybgelayo.
DHEGEYSO-Xukuumadda Soomaaliland oo isku-shaandhayn lagu sameeyey.